Amathebulethi amahle kakhulu we-2017 | Izindaba zamagajethi
Amathebulethi amahle kakhulu we-2017
UJoseph Alfocea | | Tablets
Abaningi benu mhlawumbe nifuna ithebhulethi entsha enayo shintsha idivayisi yakho endala noma, mhlawumbe, okufunayo thenga itafula lakho lokuqalat. Manje yisikhathi esihle, futhi kufinyelela kanjani kulawo madivayisi okuvuselela (abuyele esikoleni, abuyele emsebenzini ...) kepha iyiphi ithebhulethi ongayikhetha?
Iqiniso ngukuthi imakethe igcwele izinketho, eziningi futhi ezihlukahlukene, zombili ekuklanyeni, ekusebenzeni futhi, nakanjani ngentengo. Kungakho namhlanje sifuna ukukhanyisa ngalolu lwandle olukhulu lwamathuba futhi sikubonise amanye amaphilisi amahle kakhulu we-2017. Mhlawumbe, ekugcineni, ngeke ukhethe noma ikuphi kwalokhu esikuphakamisayo kodwa, ngaphandle kokungabaza, kuzoba indawo enhle yokuqala futhi ngokuqinisekile kuzokusiza uthole ithebhulethi ekufanele kakhulu.
1 Amaphilisi ama-5 amahle kakhulu we-2017
1.2 Book Lenovo Yoga
1.3 I-Asus ZenPad 3S 10
2 Ithebhulethi ehamba phambili ka-2016
Amaphilisi ama-5 amahle kakhulu we-2017
Ithebulethi "ekufanele kakhulu." Ngiyazicaphuna ngoba, noma ngokwekhwalithi nezakhi, ukusebenza, njll., Amanye amaphilisi angcono kunamanye, kuyiqiniso futhi ukuthi ithebhulethi ehamba phambili yomsebenzisi ngamunye iyona evumelana kangcono nezidingo zabo ezithile. Isibonelo, uma uzoyisebenzisela ukungena kwi-inthanethi kuphela, buka amavidiyo we-YouTube, uhlole i-imeyili futhi, ngokujwayelekile, imisebenzi edinga izinsizakusebenza ezimbalwa, kungenzeka ungadingi ukuchitha ama-euro ayinkulungwane noma ngaphezulu ku-iPad Pro ephezulu ukubeka. Futhi uma okufunayo ukuhamba nayo yonke indawo ngoba okufunayo ukushwabadela izincwadi ezisebenza ngogesi, usakhetha ithebhulethi ebumbene.
Ngokufanayo, uma uzosebenzisa ithebhulethi yakho entsha uku sebenza nsuku zonke, ngenxa phatha izifundo zakho, thatha amanothi nokuningi, udinga idivaysi enamandla, enokusebenza okuhle okuningi futhi okungathusi lapho usebenzisa izinhlelo ezimbili noma ezintathu ngasikhathi sinye.
Lokho kusho, ngokulandelayo sizobona amanye amaphilisi amahle kakhulu we-2017 ngemigomo ephelele, okungukuthi, lawo madivayisi anekhwalithi enkulu, amandla nokusebenza, futhi alusizo ngokulinganayo ekufundeni lokhu okuthunyelwe kusiphequluli kunokuklama uhlelo lwekhaya. Siqala.
Kwethulwe ngesikhathi seNkomfa Yezwe Yomhlaba EseBarcelona edlule, akungabazeki ukuthi Samsung Galaxy Tab S3 Ingenye yamathebulethi amahle kakhulu we-2017.
Le divayisi ine- Isikrini se-intshi se-9,7 nokuxazululwa kwamaphikseli ayi-1536 x 2048, usayizi omuhle kakhulu kulabo abafuna ukuhamba nawo yonke indawo nakulabo abafuna ukuwusebenzisa emsebenzini kanye / noma ezifundweni.
Yenziwe nge-aluminium, iza ne-Android 7 Nougat ngaphakathi enikwe amandla yi-a iprosesa I-Snapdragon 820 i-quad-core ephelezelwa i-Adreno 530 GPU, 4 GB ye-RAM, Isitoreji esingu-64 GB ukuthi unganweba usebenzisa ikhadi le-MicroSD elifinyelela ku-256 GB, futhi liphane 6000 mAh ibhethri ngohlelo lokushaja okusheshayo nesixhumi se-USB-C.
Okwabo izipikha ezine ze-AKG / Harman ebekwe ezinhlangothini ezingezansi ukuze kube nokuhlangenwe nakho okuhle komsindo.
Futhi yize ngethebulethi singavami ukuthatha izithombe eziningi kakhulu, asikwazi ukukukhohlwa Ikhamera enkulu ye-13 MP uyakwazi ukuqopha ividiyo ku-4K naku-30 ​​FPS.
Book Lenovo Yoga
Elinye lamathebulethi amahle kakhulu lango-2017 liza kithi livela kule femu yodumo yaseMpumalanga. Imayelana ne- Book Lenovo Yoga, idivaysi ehluke kakhulu kwamanye amaphilisi esinawo emakethe yamanje.
Yize kuyithebhulethi, iLenovo Yoga Book iwuhlobo lwe idivayisi ye-hybrid Lapho uzothola khona kokubili ikhibhodi nephaneli elengeziwe elithintekayo futhi ozokwazi ukubhala kulo ngesandla, ngakho-ke lilungele kakhulu imisebenzi enjengokuthatha amanothi ekilasi.
Mayelana nokucaciswa kwezobuchwepheshe, ine- Isikrini esingu-10,1 intshi esigcwele se-HD (1920 x 1200 pixels) futhi ngaphakathi sithola i- iprosesa I-Atom X5-Z8550, ephelezelwa ngu 4 GB ye-RAM y Isitoreji esingu-64 GB kwangaphakathi. Ngaphezu kwalokho, ibhethri layo elingu-8500 mAh lithembisa ukufika emahoreni ayi-10 ngokukhokhiswa okukodwa, ngakho-ke uzokwazi ukujabulela ukuzimela okwanele emsebenzini, ekhaya noma ekuphumeni kwakho.
Kanye nakho konke okungenhla, kufanele futhi kwaziwe ukuthi iyi- idivayisi entofontofo futhi engasindi, ayinaso isisindo esingu-690 amagremu, okubandakanya umfundi wamakhadi we-Micro SD, Ukuxhumeka kwe-LTE, IBluetooth, iWiFi, kanye nekhamera enkulu eyi-8 MP kanye nekhamera engaphambili eyi-2 MP okuthi, yize kungezona ezihamba phambili emakethe, zikulungele kakhulu ukusetshenziswa okunikezwa lolu hlobo lwedivayisi.
Siyaqhubeka nenye yamafemu aziwa kakhulu eminyakeni yamuva kanye ne- I-Asus ZenPad 3S 10, ithebhulethi okuthi, naphezu kwegama layo, linikeze i- Isikrini se-intshi se-9,7 Ngokuxazululwa kwamaphikseli angama-2048 x 1536 kanye nobukhulu bamaphikseli nge-intshi ngayinye engama-264.
Yenziwe nge-aluminium, kuyiqiniso ukuthi iletha umoya othile ku-Apple iPad, kepha ngaphakathi ngaphakathi ifaka i- Iprosesa leMediaTeK I-MT8176 eyisithupha-core ihambisane ne- I-4GB RAM, isitoreji esingu-64GB ngaphakathi, 5.900 mAH ibhethri, ikhadi le-microSD slot, isixhumi se-USB Type-C, njalo njalo.
Iphuzu layo elibuthakathaka kungaba amakhamera alo, alula, ama-8 MP ayinhloko ne-5 MP ngaphambili, noma kunjalo, ngama-430 amagremu esisindo sayo elinye lamaphilisi alula kakhulu esigabeni salo.
Kulabo abathanda ukuhamba futhi basebenzise ithebhulethi ngaphezulu ukuntweza kunetha, hlola imeyili, funda neminye imisebenzi efanayo, ngaphandle kokungabaza elinye lamaphilisi amahle kakhulu yile Xiaomi Mi Pad 2 con Isikrini se-intshi se-7,9 ngesinqumo esingu-2560 x 1600 nesisindo esingu-328 gram kuphela, ngaphakathi lapho sithola khona i- I-MediaTek MTK8176 processor eyisithupha ephelezelwa ngu 4 GB RAM, 64 GB isitoreji sangaphakathi esandekayo, kanye no I-6600 mAh ibhethri ethembisa ukufika emahoreni ayishumi nambili okuzimela.
Esigabeni sevidiyo nezithombe, ine- Ikhamera enkulu ye-13 MP nge-autofocus nokuvula f / 2.2, kanye ne- Ikhamera yangaphambili ye-5 MP nge f / 2.0 ukuvula.
Futhi njengoba ungacabanga, ukuba ngumkhiqizo weXiaomi, intengo yayo izoba ngaphezu kokuthakazelisa.
Futhi sisuka eChina saya ezweni lokuphuma kwelanga, eJapane, ukukutshela ngalokhu Sony Xperia Z4, ithebhulethi emnandi ekhuphukela ku- Isikrini esingu-10,1 intshi Ngokuxazululwa kwamaphikseli angama-2560 x 1600 okuthi, ngenxa yobukhulu nekhwalithi, akulungele ukusetshenziswa kokuqukethwe nomsebenzi noma izifundo.
Le thebulethi inikwe amandla yi Iprosesa yeQualcomm I-Snapdragon 810 ephelezelwa I-3 GB ye-RAM ne-32 GB yokugcina ukubonga okwandekayo kwangaphakathi kusikhala salo sekhadi le-MicroSD, kanye ne-a 6.000 mAh ibhethri.
Ngaphezu kwalokho, enesisindo esingu-389 amagremu, mncane ngokwedlulele futhi ulula, engenamanzi, futhi inekhamera enkulu engu-8,1 MP eceleni kwekhamera yangaphambili engu-5,1 MP.
Ithebhulethi ehamba phambili ka-2016
Iqiniso ukuthi sisengasho amanye amaphilisi angahle abe yingxenye yalolu hlu lwamathebulethi amahle kakhulu we-2017, noma engakethulwanga emakethe kulo nyaka. Ngaphandle kokuqhubeka, i IMediaPad M3 yeHuawei enesikrini esingu-8,4-intshi, i- IMediaPad T2 10.0 Pro, noma iSpanishi I-BQ Aquaris M10 Bangokhetho oluqinile kepha, sishiya i-Android ukuze sikhulume ngokuthi kuyini la ithebhulethi engcono kakhulu 2016: I-Apple Pro ye-Apple.
Into yokuqala ezokuheha ukuthi ngikhulume ngesizukulwane esedlule se- iPad Pro (yethulwe ekupheleni kuka-2015 imodeli engu-12,9,, futhi entwasahlobo ka-2016 imodeli engu-9,7)), hhayi amamodeli wamanje. Isizathu silula: njengoba i-Apple izama ukusithengisela ukuthuthuka okumnandi, isizukulwane sesibili se-iPad Pro senza okufanayo futhi nesizukulwane sokuqala, kepha inzuzo ukuthi ungayithola ngentengo engcono kakhulu.
Kusuka ku-iPad Pro singagqamisa ukukhulu kwayo 12,9 display Isibonisi se-retina, iphakeme kunaleyo yamakhompyutha amaningi ezincwajana, its Amahora we-10 wokuzimela, inamandla Iprosesa ye-A9X ephelezelwa yi-M9 motion coprocessor, i-Bluetooth 4.2 yokuxhuma, i-WiFi, ukuxhumana okungakhethwa kweselula…. Futhi konke lokhu ngaphandle kokusho ukuthi kuyithuluzi, naphezu kobukhulu balo, elikhanyayo ngendlela emangalisayo futhi elincanyana, okwenza likulungele ukuyisa noma yikuphi yize kusobala ukuthi alikwazi ukuphatheka njengethebhulethi engu-7,9.
Kepha okuvelele nge-iPad Pro akuyona i-iPad Pro uqobo, kepha inhlanganisela ye-iPad Pro ene-iOS nezinsiza zayo. Uhlelo olusebenzayo, ikakhulukazi i-iOS 11, luthatha umkhiqizo lube sezingeni elisha; manje kungenzeka ukusebenzisana ne-iPad, njengoba kunjalo kimi. I- Ikhibhodi ehlakaniphile ihlangana kahle nedivayisi, futhi njengoba ungadingi i-bluetooth, akukho glitches, akukho ukubambezeleka, okubhalayo kuvela esikrinini ngokushesha nje lapho ucindezela okhiye bayo.
Futhi ekugcineni, i- Apple ipensela, isimanga sangempela kulabo abakwazi ukudweba (hhayi njengami) nokuthatha amanothi namanothi ngesandla: ukunemba, isikhathi sokubambeka esingabonakali, induduzo, ukuzimela….
Ngithenge i-iPad Pro yami ekuqaleni kwehlobo, njengoba kwethulwa isizukulwane sesibili, kanye ne- Ikhibhodi ehlakaniphile kanye ne-Apple Pencil. Njengoba ungacabanga, ngigcine inhlama ezintweni ezintathu. Ngaphezu kwalokho, kusukela lapho ngisebenzisa i-iOS 11 (beta) engivumele ukuthi ngisebenzise ngokugcwele amandla ayo kusuka kumzuzu zero. Ngakho-ke uma usesha phakathi amaphilisi angcono kakhulu ka-2017, futhi i-iPad Pro, kunoma yibuphi ubukhulu bayo, nesizukulwane sokuqala, izokumangaza.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » Amathebulethi amahle kakhulu we-2017
Amarobhothi aqala ukufika ezitolo ezinkulu
Lolu hlelo lobuhlakani bokufakelwa luyakwazi ukwazi ukuthi ucabangani ngalo